မော်ဒန်အနုပညာဥရောပမှာတော့ပြခန်းနှင့်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကိုရှာပါရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > မော်ဒန်အနုပညာဥရောပမှာတော့ပြခန်းနှင့်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကိုရှာပါရန်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 07/06/2020)
ခေတ်သစ်အနုပညာချစ်သူများဥရောပတွင်သွားရောက်နေရာအများအပြားရှိ. ရှေးခယျြမှု၏ထိုကဲ့သို့သောစည်းစိမ်နှင့်, ဖြစ်ကောင်းအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တစ်ဦးရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး. သို့သျောလညျး, ဖို့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင် အလည်အပတ် အနုပညာတူးဖော်ရေးများအတွက်ဥရောပရဲ့ချုပ်ဟော့စပေါ့, ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ် ပတ်လည်? အချို့နှင့်အတူကောင်းစွာစီစဉ်ထား ရထားစီး, သငျသညျဥရောပ၌ခေတ်သစ်အနုပညာပြခန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းကရွေးခြယ်သားအပေါင်းတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်:
ကိုတိတ်မော်ဒန်အနုပညာပြခန်း, လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
တိတ် ခေတ်သစ်အနုပညာပြခန်း တွင် လန်ဒန် ဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခေတ်ပြိုင်ခေတ်သစ်အနုပညာပြခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာကျော်ဂုဏ်ယူသောမွို့၌သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ပါဘူး 1,000 ပြခန်း. သို့သျောလညျး, ဒါဟာအကြောင်းတည်းလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အတူ ခရီးသွားဧည့်. ကိုတိတ်မော်ဒန်အစပိုင်းတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသောကိုတိတ်ပြခန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် 1897. အချိန်ပို, ကိုတိတ်တိုးချဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအတွက် 2000 လေးကွဲပြားခြားနားသောပန်းချီပြခန်းသို့ခွဲခြားခဲ့သည်. သူတို့အားလေးခုထဲက, ကိုတိတ်မော်ဒန်အများဆုံးလည်ပတ်မှုနှင့်အတူတစျခုဖွစျသညျ, ထိုသို့ဖွင့်အနုပညာလက်ရာများထက်ပိုရတာဟာ. သငျသညျကိုယျအဘို့လန်ဒန်ရဲ့အနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, သင်အလွယ်တကူမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားနဲ့ မှအများစုမှာအဓိက ဥရောပမြို့ကြီးများ.
မော်ဒန်နှင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာအမျိုးသားပြခန်း, ရောမမြို့, အီတလီ
ကိုခေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြခန်း အီတလီတွင်မော်ဒန်နှင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ, ၌ဤအနုပညာပြခန်း ရောမမြို့ သင်လိုအပ်သမျှကိုရှိပါတယ်. ထိုသို့မကြာသေးမီကလတ်ဆတ်သစ်ကိုကြည့်တယ်, အနုပညာဟာပြပွဲမှာ ပို. ပင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေခြင်းငှါဒါ. ဤသည်မှာပြခန်းတင်ဆက်မှု၎င်း၏လမ်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ themes များအပေါ်ကိုပိုမိုအလေးပေး, ခေတ်နှင့်စတိုင်များ၏တူထက်အရောင်အဆင်းနဲ့ပုံစံ. သောဧည့်သည်သစ်တစ်ခုအတွက်အနုပညာကိုခံစားခွင့်ပြု, ထူးခြားတဲ့လမ်း, ခရီးစဉ်အမှတ်ရစရာဖြစ်လိမ့်မည်သေချာ. ရောမမြို့မီးရထားအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်. အချို့ရှိပါတယ် သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ သင်တွေ့ကြုံခံစားဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ယူနိုင်ပါတယ် ပို။ အီတလီ.
Kunsthalle ဇူးရစ်, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ခေတ်ပြိုင်နှင့်ခေတ်ပေါ်အနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုမြှပ်နှံခြင်းနှင့်တက်ကြွနေသည်, မြောက်မြားစွာပြခန်းအသက်ရှင်လျက်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူ. မကြာခဏသွားရောက်လည်ပတ်ဘို့အကြံပြုသောတဖြစ်ပါသည် Kunsthalle ဇူးရစ်. ဒါဟာဧည့်သည်စိတ်ဝင်စားရန်ပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှကြောင့်ယာယီသက်သေခံပစ္စည်းများကိုရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားမကြာခဏပြောင်းလဲမှု Kunsthalle ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာ reinvent အခါတိုင်းကူညီ. သင့်ထံမှရထားဇူးရစ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြူးနစ်, ဗီယင်နာ, အဖြစ်သင့်ခေတ်သစ်အနုပညာအမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်သွားရောက်ကြည့်ရှုအခြားဥရောပမြို့ကြီးများ.
Pompidou, ပဲရစ်, ပြင်သစ်
ဥရောပတိုက်တွင်ခေတ်သစ်အနုပညာပြခန်း၏အဘယ်သူမျှမခရီးစဉ်သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲပြည့်စုံဖြစ်ပါသည် ပဲရစ်, ပြင်သစ်. သို့သျောလညျး, အစား Louvre ၏, ကျနော်တို့က Pompidou ဖို့ဦးတည်အကြံပြု. ထိုပြည်၌သင်တို့သည်၎င်း၏စက်လှေကား၏ရှိသမျှနှင့်အတူထူးခြားတဲ့ဗိသုကာဖွဲ့စည်းပုံတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ပိုက်, ယင်းအပြင်ပန်းအပေါ်မြင်နိုင်နှင့်သံမဏိဘောင်. သို့သော်အတွေ့အကြုံရှိမဆုံးပါဘူး, အဆိုပါ Pompidou ကျော်ရှိပါတယ်အဖြစ် 50,000 ၎င်း၏စုဆောင်းမှုအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်. ဒါဟာဆက်ဆက်တစ်ဦးအလည်အပတ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်သည့်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာအထင်ရှားဆုံး collection များကိုတစ်ဦးရဲ့. ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေရထားနဲ့ပဲရစ်ကိုရယူပါ, အမ်စတာဒမ်, ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်ဥရောပအခြားမြို့ကြီးများ.
ဥရောပတိုက်တွင်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာပြခန်းဆက်ဆက်ကြည့်ရှုရန်မျက်မှောက်များမှာ. အနုပညာရပ်တစ်ခု-oriented ခရီးစဉ်စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လုံးကိုထိုမြို့ကိုအလွယ်တကူရထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျသှားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလိုလျှင်, စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား ယခုနှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmodern-art-galleries-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / nl သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
europetravel လန်ဒန် longtrainjourneys အကြံပေးချက်များ trainjourney Tranride ရထား travelswitzerland